सुनको भाउमा दिनदिनै उछाल, तोलाकै रु. ९९ हजार Bizshala -
सुनको भाउमा दिनदिनै उछाल, तोलाकै रु. ९९ हजार
काठमाण्डौ । नेपाल बजारमा आज बिहीबार सुनको भाउले फेरि रेकर्ड ब्रेक गरेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा ५०० रुपैयाँ बढ्दै सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९९ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ५६० रुपैयाँ कायम भएको छ।
यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार पनि सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९६ हजार ३०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९५ हजार ८६० रुपैयाँ कायम भएको थियो।
यसैबीच चाँदीको भाउ भने आज स्थिर रहँदै १ हजार २२५ रुपैयाँ नै कायम भएको छ । चाँदीको भाउ हिजो बुधबार तोलामा २० रुपैयाँ घट्दै १ हजार २२५ रुपैयाँ कायम भएको थियो।